Download Solid Explorer ကိုဂန္ထဝင် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အစိုင်အခဲ Explorer ကိုဂန္ထဝင်
အစိုင်အခဲ Explorer ကိုဂန္ထဝင် APK ကို
တစ်ကြော့မော့ကြည့်အများအပြား features တွေနှင့်အတူအကောင်းတစ်ဖိုင်ကိုရှာဖွေသူရှာဖွေနေပါသလား ဤနေရာတွင်သင်မြင်ကောင်း!
အစိုင်အခဲ Explorer ကိုသငျသညျအားအသစ်သောဖိုင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဆောင်တတ်၏ရာနှစ်ခုလွတ်လပ်သောပြားနှင့်အတူ nicest ရှာဖွေနေဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဖို့ Dropbox, Box, Google Drive ကိုနှင့် One Drive ကိုအပါအဝင် cloud storage တစ်ခုကျယ်ပြန့်ထောက်ခံမှုပေးသည်။ ဤဖိုင်မန်နေဂျာသင်၏ Windows PC နဲ့ FTP, SFTP နဲ့ WebDav အတူလုပ်ကိုင်အများအပြားဝေးလံခေါင်သီသောဆာဗာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းလွတ်လပ်သောပြား Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးချောမွေ့စွာဖိုင်လွှဲပြောင်းဘို့ခွင့်ပြု formats.Two ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အသုံးအများဆုံး archive ကို extract ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဖိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကိုကိုင်နှင့်အခြား panel ကိုကဆွဲယူပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်အလွယ်တကူ PC ကိုရှယ်ယာ, မိုးတိမ်များနှင့်အမြစ်ဖိုလ်ဒါအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောနေရာများအကြားဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးအမြစ်ရှာဖွေသူရှာနေလျှင်ဤဖိုင်မန်နေဂျာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစနစ်အားအဆင့်ကိုဖိုင်ကိုဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းနဲ့အမြစ်ရှာဖွေသူပါရှိပါတယ်။ သင်ဖတ် / Write အဖြစ်ဖိုင်စနစ်များ mounting အကြောင်းကိုမှတ်မိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အစိုင်အခဲ Explorer ကို automagically သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုပါလိမ့်မယ်။
အစိုင်အခဲ Explorer ကိုလည်းသင့်မီဒီယာကြည့်ရှုဘို့အကောင်းတစ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဤဖိုင်မန်နေဂျာ Download ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲသင်၏ PC ကိုသို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်သည်ကနေဂီတနှင့်ဗီဒီယိုများကို stream နိုင်ပါတယ်။ သင်ပင် Chromecast ကိုမှစီးချပစ်နိုင်သည်!
ဒီ file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူနှင့်အတူသင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောပင်ဖိုင်ကိုအိုင်ကွန်အရောင်များပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တော့အမူအရာသို့မဟုတ်ထုံးစံအရောင်အစီအစဉ်များနှင့်အတူအရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲပြောင်းလဲနေသောစာရင်းအဖြစ်အများအပြားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူအလွန်ကြော့ UI ကိုကြည့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
- နှစ်ဦးလွတ်လပ်သောပြားဖိုင်ကို browser များအဖြစ်အစေခံ
- Drag and Drop အတွင်း, ပြားအကြား
- လုံခြုံတဲ့ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ FTP client
- SFTP ကို ​​client
- Owncloud နှင့် Yandex ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်း WebDav client ကို
- SMB / CIFS client ကို Windows မှာဖိုင်ခွဲဝေမှုနှင့်အတူ shared browsing အတွက်ကွန်ယက်ကိုဖိုလ်ဒါဘို့ခွင့်ပြု
- သင့်ရဲ့ PC ဖိုင်များကိုမျှဝေမှုအတွက် FTP ဆာဗာ
- ZIP ဖိုင်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ယူရန်နိုင်ခြင်း, RAR နဲ့ TAR မော်ကွန်းတိုက်
- TAR archives နဲ့ password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် ZIP ဖိုင်မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
- အတော်များများကမိုဃ်းတိမ်ကို client များ: Dropbox, Box, SkyDrive ကို (တစျခုမှာ Drive ကို), Google Drive ကို, SugarSync, Copy ကူး, Mediafire တို့, Owncloud (WebDav မှတဆင့်), Yandex (WebDav တဆင့်)
- Root access ကို Solid Explorer ကိုအပြည့်အဝ functional ဖြစ်စေအမြစ်ရှာဖွေသူစေသည်
- INDEX ရှာဖွေရေးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ဖိုင်များကိုတွေ့
ဒီ app ကိုကြော်ငြာကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ playstore ကနေ Unlocker purchasing အားဖြင့်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် Dropbox ကို client ကို
အစိုင်အခဲ Explorer ကိုဂန္ထဝင်
6.53 ကို MB